नारिता उडान फागुन १९ देखि, ट्रान्जिटको झन्झट समाप्त हुने – Nepali Digital Newspaper
नारिता उडान फागुन १९ देखि, ट्रान्जिटको झन्झट समाप्त हुने
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 8 months ago February 10, 2020
नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी फागुन १९ गते (२ मार्च २०२०) देखि जापानको नारितामा हप्ताको तीन दिन सिधा उडान प्रारम्भ गर्ने भएको छ । एयरबस वाइडबडीबाट गरिने सिधा उडान सोमबार, बुधबार र शुक्रबार हुने निगमले जनाएको छ । बिहान १ बजेर २५ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गरिने सो विमान सोही दिन अपरान्ह् ६ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौंमा अवतरण गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
बताइएअनुसार हालका लागि प्रवद्र्धनात्मक भाडाडर काठमाडौंबाट नारिताका लागि एकतर्फी ३७ हजार र दुईतर्फी भाडा ७३ हजार निर्धारण गरिएको छ । यसका साथै विजनेस क्लासमा यात्रा गर्नेले प्रति व्यक्ति २५/२५ के.जी. का दुईवटा ब्यागेज र इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्नेले प्रतिव्यक्ति २३/२३ के.जी.का दुई वटा व्यागेजको सुविधा पाउने छन् । नारिताको उडान प्रारम्भ भएपछि टोकियो र वरपरका यात्रुहरुलाई सुविधा हुनेछ भने सिधा उडानले गर्दा ट्रान्जिटको झन्झट समेत समाप्त हुनेछ ।